समानुपातिकमा एमाले अघि अघि काग्रेस पछि पछि माओवादी आधा मात्रै !::mirmireonline.com
समानुपातिकमा एमाले अघि अघि काग्रेस पछि पछि माओवादी आधा मात्रै !
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जीतेको तुलनामा कम भए पनि समानुपातिकमा पनि एमालेको अग्रता कायम छ । ठूलो अन्तर नभए पनि अग्रस्थान ओगट्न एमाले सफल भएको छ । त्यसै गरी प्रत्यक्षमा धेरै जीत हात नपारे पनि समानुपातिकमा एमालेको पछि पछि काग्रेस उक्लिएको छ ।
वाम गठबन्धनको फाईदा लिएर प्रत्यक्षमा काग्रेसलाई पछि पारे पनि माओवादी केन्द्र समानुपातिकमा भने काग्रेसको आधा जति मात्र मत ल्याएर अघि बढीरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार एमालेले ४ लाख ४६ हजार ३७, नेपाली कांग्रेसले ४ लाख २९ हजार ९१ र माओवादी केन्द्रले २ लाख ५ हजार ३ सय ९० मत पाएका छन् । चौंथोमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र पाँचौंमा विवेकशील साझा पार्टी छन् ।
राजपा नेपालको २५ हजार ७ सय ४१ र विवेकशील साझाको २३ हजार २ सय ३६ मत छ । यस्तै राप्रपाको २१ हजार ९ सय ९९, संघीय समाजवादी फोरमको १८ हजार ३ सय ४०, नयाँ शक्ति पार्टीको १८ हजार १ सय २४ राप्रपा प्रजातान्त्रिकको ९ हजार २ सय ६०, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ७ हजार १ सय १८ मत रहेको छ । अन्य दलको २८ हजार २ सय १६ मत रहेको आयोगले जनाएको छ ।